NIC ASIA Festival Offer | Dashain Tihar Offer | NIC Asia Bank
चाडपर्वको आयो हर्ष र उमंग Digital उत्सवले सबैजना दंग ।
आपसी सद्भाव, एकता, उत्साह, उमंग र परिवारबाट टाढा रहेका नेपालीलाई जोड्ने साझा पर्व, विजया दशमीको पावन अवसरमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।
के गाउँ, के शहर, के दुर्गम, के सुगम, सबैतिर दशैंको उल्लास छाएको छ । पिङ खेल्ने, चंगा उडाउने, घरमा भएको मिठोमसिनो खाने, पारिवारिक जमघट हुने यो उमंगमा रौनक थप्न एन आई सी एशिया बैंक प्रस्तुत गर्दछ, अत्याधिक छुटले भरिएको Digital उत्सव योजना । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भावनात्मक सबै पक्ष जोडिने यस दशैं तिहार र छट पर्वमा सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरुलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न २१ भन्दा बढी पसलहरुमा Digital माध्यम (एन आई सी एशिया मोबैंक, डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड) बाट भुक्तानी गर्दा आकर्षक छुट सुविधाहरु ल्याएको छ । कार्तिक १ देखि मंसिर ५ गतेसम्म चल्ने यस योजनामा आफूलाई आवश्यक सामान खरिद गरी अतुलनिय छुटका साथमा यस वर्षको चाडपर्वलाई उल्लासमय र अविश्मरणीय बनाउनुहोस् । त्यसबाहेक अन्य ६ इकमर्सहरुमा असोज २७ गतेदेखि कार्तिक १ गतेसम्म २५ प्रतिशतसम्म क्यासब्याक सुविधा पनि उपलब्घ छ । साथै यस अवसरमा तपाईले गरेको हरेक डिजिटल कारोबारमा बैंकको तर्फबाट रु १ अनाथ, वृद्धवृद्धा तथा अन्य सामाजिक उत्तरदायित्वमा सहयोग गरिनेछ । त्यसैगरी डिजिटल दक्षिणा योजना पनि ल्याएको छ । यो योजना अन्तर्गत विजया दशमी देखि पूर्णिमासम्म एन आई सी एशिया मोबैंकबाट एन आई सी एशियाकै खातामा रकम पठाउँदा रकम प्राप्त गर्नेले १० प्रतिशतसम्म रकम फिर्ता (Cashback) प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । यस डिजिटल दक्षिणा सुविधा ग्राहक महानुभावहरुको खातामा रकम पठाउँदा मात्रै उपलब्ध हुनेछ ।
इलेक्ट्रोनिक्स सामान (Electronics)
चाडपर्वको उमंग, नयाँ इलेक्ट्रोनिक्स समानसँग ।
घरमा भित्रिने नयाँ नयाँ सामानहरुले गर्दा पनि चाडपर्वको रौनक अझै बढी हुन्छ । अनि तपाई चाहिँ नयाँ नयाँ इलेक्ट्रोनिक्स सामानको बारेमा के सोच्दै हुनुहुन्छ ? सपरिवारसँगै बसेर हेर्ने टिभी, गर्मि भयो भने पंखा वा एसी, राइसकुकर, भ्याकुम क्लिनर लगायतका इलेक्ट्रोनिक्स सामान पनि चाहिन्छ नी यो सबैको समानको जोरजाम गरिसक्नुभयो कि अझै गरिसक्नुभएको छैन ?
एन आई सी एशिया बैंकले तपाईको यसपालिको चाडपर्वलाई थप उल्लास र उमंगको रंग दिन ल्याएको छ विभिन्न पसलहरुमा इलेक्ट्रोनिक्स सामानको खरिद गरी DIGITAL माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा १८ प्रतिशतसम्मको छुटको अफर ।
नारीको सौन्दर्यमा लुकेको राज,
गलामा आकर्षक गहनाको साथ ।
तपाईको पनि योजना होला नि यसपालीको दशै, तिहार तथा छठ आकर्षक डिजाइनका नयाँ गहना लगाउने । तपाईको योजनालाई थप सहज रुपमा पुरा गर्नको लािग एन आई सी एशिया बैंकले ल्याएको छ छुटनै छुटको बहार । विभिन्न पसलहरुमा आकर्षक तथा नयाँ डिजाइनका गहना खरिद गरी एन आई सी एशिया बैंकको कार्ड वा मोबैंकबाट भुक्तानी गर्नुहोस् र पाउनुहोस् ३० प्रतिशत सम्मको आकर्षक छुट ।
सपिङ्ग मल (Mall)
दशैंमा पारिवारिक जमघट र खानपानसँगै एक सरो नयाँ लुगा फेर्ने हाम्रो पुरानो परम्परा नै हो । नयाँ कपडासँगै चाडपर्वको किनमेल गर्न कहाँ जाने योजना बनाउदै हुनुहुन्छ ? कि किन्ने सामानको लिस्ट त लामै भयो भनेर झन्झट लागेको छ ? अब बजार बजार डुलेर सामान खोज्दै भौतारिनु पर्दैन किनकि एन आई सी एशिया बैंकले आफ्ना ग्राहक महानुभावहरुको सुविधाको लागि विभिन्न मलहरुमा सामान खरिद गरी एन आई सी एशिया बैंकको कार्ड वा मोबैंकबाट भुक्तानी गर्दा आकर्षक छुट योजना ल्याएको छ । अविश्वसनिय छुट सुविधा पाइने भएपनि अन्त कहाँ जाने भन्ने त चिन्ता किन लिने ?
यस पालिको दशैंमा लगाउने हैन त मन परेको ब्रान्डेट कपडा ? एन आई सी एशिया बैंकका ग्राहक महानुभावहरुलाई चार्डपर्वको अवसरमा KTM CTY मा विशेष छुट सुविधा उपलब्ध गराएको छ । कात्र्तिक १ गते घटस्थापनाको दिन KTM CTY बाट आफूलाई मन परेको कपडा खरिद गरी एन आई सी एशिया बैंकको डेबिट वा क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी गर्नुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् ५ प्रतिशतसम्म छुट ।
दशैमा सपरिवारले रातो टिका र जमरा लगाएको त्यो पल क्यामेरामा कैद गर्नको लागि क्यामेरा तयार छ ? कि क्यामेरा भन्दा नयाँ मोबाइलले नै फोटो खिच्ने योजना छ । यो चाडपर्वमा कसैलाई अन्य ग्याजेट कसैलाई उपहार दिएर सरप्राइज गर्ने योजना छ ? यदि तपाई एन आई सी एशिया बैंकको ग्राहक हुनुहुन्छ भने अब यी सबै योजनाहरु अधुरा रहने छैनन्, किनकि एन आई सी एशिया प्रस्तुत गर्दछ, आफ्ना ग्राहकहरुको लागि छुट नै छुटको अफर डिजिटल अफर । एन आई सी एशिया बैंकको डेबिट वा क्रेडिट कार्ड तथा मोबैंक प्रयोग गरी तपाई विभिन्न पसलहरुमा आफूलाई मन परेको वा आवश्यक परेको ग्याजेट खरिद गर्दा १८ प्रतिशत सम्मको छुट सुविधा उपलब्ध छ ।
सवारी साधन (Vehicle)
Suzuki र NIU मा सवारी साधन किन्दा एन आई सी एशिया बैंकका ग्राहकहरुलाई विशेष छुट । जब चाडपर्वको मौसम सुरु हुन्छ, घर कहिले जाने, कसरी जाने, के मा जाने आदि विषय पनि सोच्नुपर्छ । तर, यसपटकको चाडपर्वमा यो सबै सोच्नै पर्दैन किनकि एन आई सी एशिया बैंकले ल्याएको छ आफ्ना ग्राहक महानुभावहरुको लागि मात्रै Suzuki को मोटरसाइकल खरिद गरी कार्डमार्फत भुक्तानी गर्दा थप ३ हजार छुट सुविधा छ त्यस्तै NIU बाट मनपरेको सवारी साधन खरिद गर्दा रु ७ हजारसम्मको आकर्षक छुट सुविधा दिइएको छ । यो योजना मंसिर १४ गतेसम्म लागु हुनेछ ।
दशैं स्पेसल खाद्यान्न (Food & Beverage)
दशैंमा अघाउने गरी मासु खाइएन भने दशैं कसरी दशैं जस्तो हुन्छ ?
दशैंमा अघाउने गरी मासु खाइएन भने दशैं कसरी दशैं जस्तो हुन्छ ? चाडपर्व भनेकै आफ्नो क्षमता अनुसारको मिठो खाने, राम्रो लगाउने नै हो । यस पटक भने तपाईको मिठो खाने रहर एन आई सी एशियाले पुरा गर्नेछ । किनकि एन आई सी एशिया बैंकका ग्राहक महानुभावहरुले विभिन्न पसलहरुमा मासु वा अन्य खाद्यान्न खरिद गरी बैंकको कार्ड वा मोबैंकबाट भुक्तानी गर्दा आकर्षक छुट सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
यस पालिको चाडपर्वमा सिम्रीक एयरको साथमा सरर । वर्षै देखिको तपाईको विभिन्न ठाउँ घुम्ने चाहाना यस पटकको चाडपर्वको अवसरमा एन आई सी एशिया बैंकको साथमा पुरा हुनेछ । एन आई सी एशिया बैंकको डेबिट वा क्रेडिट कार्ड वा मोबैंकबाट भुक्तानी गर्दा यस प्रकारको भाडा दर उपलब्ध छ ।
Rate Per Charter(NPR)
Rate Per Person(NPR)
90,000 18,000 30 min
KTM -Langtang- KTM
1,20,000 24,000 30 min
6,50,000 1,30,000 1 Hour
1,20,000 24,000 1 Hour
PKR-Annapurna Base camp- PKR
1,90,000 38,000 1 Hour
Dharan, Bhedetar-pathivara-dharan, Bhedeter
1,50,000 38,000 30 Min
CITY CENTER DISCOUNTS
Get discounts on various CITY CENTER OUTLETS
PIONEER TRADE CONCERN
G-03 Up-To 50%
F-A7 Up-To 50%